PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-11-07 - Ake sinake nez­i­bongo zomd­abu bakithi
Ake sinake nez­i­bongo zomd­abu bakithi
Eyethu Baywatch - 2018-11-07 - LETTERS • INCWADI LETTERS • IZINCWADI -
KUBE yisi­fiso sami na­muhla ukuthi ke ng­inx­enxe aba­fundi bepheb­hand­aba lakho Mh­leli ukuthi, bake bathi uku­naka izinkondlo zomd­abu nokub­halwa kwazo. Lokhu ngikusho ngoba kubonakala lehla izinga lezinkondlo nasekub­hal­weni kwazo. Kunezinkondlo okubonakala sen­gathi azisanakiwe, kanti yi­zona im­ban­gela yokuqala ko­moya no­fuqu­fuqu emkhakheni wokub­halwa kwazo. Izinkondlo zomd­abu zinhlobo mbili. Phakathi kwazo kukhona lezi okuthiwa iz­i­bongo zomd­abu, kanye nalezo okuthiwa iz­i­bongo zez­i­manje, nazo en­gin­gac­haza ngazo nge­lizayo. Umehluko omkhulu phakathi kwazo wukuthi, ezomd­abu za­qan­jwa za­haywa ngom­lomo en­dulo, kanti ezes­i­manje ziqan­jwe ngokub­halwa. Angiphinde ngiku­veze-ke futhi nokuthi aku­zona zonke lezinkondlo oke uzwe abanye bez­i­haya, bese wena uthi zinkondlo zes­i­manje cha akun­jalo.Lokhu ngikusho ngoba miningi im­ib­halo ebhalwa ilan­dele iz­im­pawu zobunkondlo, kodwa in­gen­abo ubunkondlo kuyo kodwa kube ukuh­leleka nan­gendlela umb­hali wayo ay­ib­halile, ethi yena ub­hala inkondlo kanti ub­hala into ethi may­i­fane nenkondlo. Iz­i­bongo zomd­abu nazo ngok­wazo zinhlobonhlobo.
Kukhona ezez­into ezin­gaphili, kukhona ezez­into eziphi­layo njengezil­wane ez­i­fuyi­weyo, kukhona ez­a­bantu abanga­bantu nje phaqa, bese kuba khona ezezin­duna na­makhosi na­maqhawe amakhulu es­izwe.
Kwez­a­bantu khona, ikakhu­lukazi abakhulu, sithola umuntu ebongwa nge­siqu somz­imba wakhe, uzalo lwakhe ikakhulu amaqhawe asozal­weni, izigameko zobuqhawe bakhe kanye nezinye athin­teka kuzo, kanye nokunye okun­jalo.
Lokhu-ke sin­gathi iy­ona ndikimba yez­i­bongo noma umqondo oqukethwe yiz­i­bongo. Nasi isi­bonelo: Iz­i­bongo Zomd­abu Iz­i­bongo Zen­qomfi Nqom­fiza kahlokohlok! Ny­oni edlelwa es­ithebeni njen­gen­sonyama, Ngiyakubashaya abafana abaku­cupha ngen­ganga, Mbom­vana ozishaya ig­ilo, Nog­cansela kwe­lenkan­gala Ngok­wesaba iz­imamba ehlozini, Zan­goma ezeth­wase ol­wan­dle, Manda sithebeni njen­gen­sonyama, Madliwa ekha­fulwa bethi uyanuka. Dun­can Mthiyane Stress­ing the need for po­etry